Ukubhema ngesikhathi sokukhulelwa kubeka umntwana ongakazalwa engozini ezihambisana nezinkinga zempilo yingozi. Kunezizathu eziningana zokuthi kungani abesifazane abakhulelwe Akufanele ubheme. Mayelana 20 amaphesenti abesifazane abakhulelwe zithunqe. Nokho, akukho izinga eliphephile ukubhema. Abesifazane belulekwa ukuba uyeke ukubhema. Ngisho nokuncipha kwenani kagwayi ngibhema ngosuku, namanje udalula umntwana izinto eziyingozi. Ukubhema ngesikhathi sokukhulelwa kubeka umntwana engcupheni futhi ingenza umuntu abe nethala eziningi zempilo. Kukhona inombolo obuqand izizathu zokuthi kungani abesifazane kufanele ayeke ukubhema ngesikhathi uma they thola cishile ukuthi ukhulelwe.
ingozi Ephakeme kwesisu
Abesifazane labahlukumeta ukubhema ngesikhathi sokukhulelwa babe nengozi enkulu kwesisu kuka non-ababhemayo noma zisanda kukhululwa ababhemayo banamathuba abesifazane. Ukubhema kungenza ngokoqobo ukubulala umntwana ongakazalwa. Kusekhona ingozi eliphezulu kakhulu ukuzalwa kwengane isishonile e omama ababhema noma sihlupheka yokuhogela intuthu kagwayi ngesikhathi sokukhulelwa.
Izingane ezizalwa zinesisindo esiphansi
Amakhemikhali kagwayi akwazi ukungena ngokusebenzisa placenta aba yigazi womntwana, okubangela ubambezela, ukwenza le nqubo nzima-fetus. Izingane ngesikhathi sokuzalwa ne isisindo ongaphakeme, abanezinkinga zempilo, ngoba imizimba yabo iba buthakathaka.
Ukubhema ngesikhathi sokukhulelwa ingenza umuntu abe nethala kokuzalwa umntwana ngaphambi kwesikhathi. wazalwa kungakabi isikhathi ayingozi empilweni yengane. I ngaphambili, bese bethola umntwana, cishe ukuthi kuyoba lula ukuthuthukisa kahle ngokwanele ukuze akwazi ukuphefumula, ngaphandle kosizo.
Ithonya kagwayi ku sokukhulelwa
Ukubhema kuyokwandisa namathuba kwenhliziyo, kwandisa umfutho wegazi futhi suppresses isimiso sezinzwa. Kuthinta hhayi kuphela ingane, kodwa futhi kubangela ukwenyuka yezinkinga kumama. Kungase kube kahle igazi ekunqandeni. Ukubhema ngesikhathi sokukhulelwa, kunikeza ithuba enkulu yokuba ingozi ukhulela ethunjini, ongathwali ukukhulelwa, ukuzalwa kwengane isishonile, izinkinga ne-placenta, ukuhlanza, ukopha ngesikhathi sokukhulelwa, igagasi le, lapho kakhulu yi-amniotic fluid, inkwethu.
It is eyaziwa ukuthi ukubhema kubanga izinkinga nge placenta. Placenta previa, yisimo lapho placenta kuyinto ephansi futhi ngenxa kuvulwa kwesibeletho, kungase kubangele lamabutho ngwengwzi. Ngakho-ke ahlukaniswa ngokuphelele noma ngokwengxenye esuka odongeni lesizalo. previa placenta kuyinto inkinga evamile kungadalwa ukubhema. Lezi zinkinga esinomhlapho kungadala ukopha okunzima phakathi kwezidingo inqubo ukuthi kungenzeka ezohlobo usongo kukamama kanye nengane. A ingozi ukuzalwa kwengane isishonile sengane sanda izikhathi eziningana ngenxa yezinkinga placenta. Olunye ucwaningo ukugqamisa nokuhlobana okukhona phakathi kokubhema SIDS, lapho izingane, omama ngibhema ngesikhathi sokukhulelwa ingane, kukhona kathathu basemathubeni amaningi okuthi babulawe kusukela SIDS. Uma kungukuthi ukhulelwe futhi intuthu, manje yisikhathi ukuyeka lo msebenzi elimazayo. Umonakalo ka ukubhema ngesikhathi sokukhulelwa siphezulu umntwana kuka unina. Ngakho-ke, kuyafaneleka ukucabanga ngokuthi yini ozimisele ukuyenza ingane yakho. Zikhona izindlela ezihlukahlukene ukuyeka, futhi udinga ukuthola omunye ezokwenza ikusebenzele. Uxhumane nodokotela wakho uma udinga ulwazi oluthe xaxa kwi izindlela ezahlukene kuwe ulwe ukubhema, olutholakalayo. Ukubhema kuyingozi. Kungabangela izinkinga zezempilo omkhulu abesifazane, ezisukela isifo senhliziyo nomdlavuza. Kodwa into ebaluleke kakhulu wukuthi umama wayethenge hhayi ngizale kakade abachitha impilo yengane yakhe engakazalwa. Ukwephulwa singenzeka hhayi kuphela ngesikhathi sokuzalwa, kodwa futhi ukuthuthukiswa kwe-nomntwana esizalweni, ngoba ukubhema kuthinta kumiswa imizimba yayo.
Imikhuba ye amniotic Inkomba uketshezi ngesonto. Izimbangela, ukuxilongwa kanye nokwelashwa nokuntuleka kwamanzi kubantu besifazane abakhulelwe